မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများရဲ့ - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
#1 ။ အဘယ်ကြောင့်ငါကျော်ကတခြားလေ့ကျင့်ရေးပံ့ပိုးပေးရှေးခယျြသင့်သလဲ
၎င်းတို့အားလိပ်ပေါ်၏ကြီးမားသောရှိပြီးစီးပွားရေးအတွက်သင်တန်းဆရာ empaneled ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်တန်းဆရာရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများအတွက်ခက်ခဲသဘောတရားများကိုရှင်းပြဖို့ပဲနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်အသိပညာ၏အကျယ်အတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းသည်းခံခြင်းနှင့်စွမ်းရည်၏အားလုံးအရေးကြီးသောအရည်အသွေးတွေထဲမှာမ excel ။
၎င်းတို့အား Microsoft က, Red Hat, HP ကနှင့် EMC တစ်ခုအခွင့်အာဏာလေ့ကျင့်ရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့အားလည်း RedHat များအတွက်စာမေးပွဲစင်တာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
သငျသညျလေ့လာမှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်အောင်လေဆိပ်ပစ်ကပ်, ဟိုတယ်, အစားအစာ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း Desk ထောက်ခံမှု - ကျနော်တို့အဆုံးသတ်-to-end ဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။
#2 ။ သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးစင်တာများအဘယ်မှာရှိကြသနည်း
ဆန်းသစ်နည်းပညာ Solutions သင်တန်းစင်တာများ
#3 ။ သင်တန်းအချိန်ဇယားကဘာလဲ?
အထွေထွေသချိန်9ထံမှနေသောခေါင်းစဉ်: 00 မှ5နံနက်: 00 ညနေကျနော်တို့ client ကိုရဲ့ preference ကိုအညီအလုံအလောက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သော်လည်း။
#4 ။ ကျွန်မအတန်းအစားမှမရောက်မှီငါသည်သင်တန်းပစ္စည်းမှတဆင့်သွားကြဖို့ရှိပါသလား?
ဒါဟာမဖြစ်မနေအကြံပြုပေမယ့်မပေးပါ။ သငျသညျကိုကြိုတင်ကောင်းစွာမှတ်ပုံတင်ရန်လျှင်, ငါတို့သည် (အပိုကုန်ကျစရိတ်မှာ) သငျသညျမှနျ courseware Courier နိုင်ပါတယ်။ အချို့သောသင်တန်းများအတွက်, အီလက်ထရောနစ်ဗားရှင်းကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
#5 ။ ငါ "itstechschool@gmail.com" မှအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒီရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကအီးမေးလ်အိုင်ဒီလား?
ဟုတ်ကဲ့, ဒီဟာလက်ခံရရှိသူကျွန်တော်တို့ရဲ့ info@itstechschool.com အီးမေးလ်လိပ်စာကနေဒါမှမဟုတ်သူ / သူမကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်များကိုဖတ်ရှုတော်မူကြောင်းကိုအတည်ပြုချက်ကိုမခံမယူကြပါလျှင်အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရယူပေးနိုင်မပါလျှင်ကျွန်တော်ကိုသုံးပါသောအရာရှိတဦးကအီးမေးလ်လိပ်စာဖြစ်ပါတယ်။
#6 ။ 1-on-1 Is လမ်းညွှန်အတိုင်းလေ့ကျင့်™?
ဟုတ်ကဲ့, ကသင်တန်းဆရာတစ်ခုတည်းပါဝင်သူအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်သူ / သူမ၏မေးမြန်းချက်ယူဘယ်မှာ, အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
စျေးနှုန်း & ငွေချေမှု
#1 ။ သငျသညျကို Microsoft Software များအာမခံချက်ဘောက်ချာလက်ခံပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့လက်ခံလုပ်ပေး Microsoft ကမိတ်ဖက်အခွင့်အာဏာခံရ။
#2 ။ သငျသညျ Redhat သင်ယူခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုလက်ခံပါသလား
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့လက်ခံလုပ်ပေး RedHat ဖက်ခွင့်အာဏာခံရ။
#3 ။ မည်သည့်အပိုဆောင်းစွဲချက်ခရစ္စမတ်နှင့်နှစ်သစ်ကူးကာလအတွင်းရှိပါသလား
အဘယ်သူမျှမ, ကုန်ကျမည်သည့်နေ့က / အဖြစ်အပျက်၏တူညီသောမသက်ဆိုင်ဘဲမူလဖြစ်လိမ့်မည်။
ခရီးသွား & ဗီဇာ
#1 ။ ငါဘယ်နေရာမှာမဆို RCHE စာမေးပွဲပွုနိုငျသနညျး
ဟုတ်ပါတယ်, တဦးတည်းဆိုခွင့်အာဏာ RedHat စာမေးပွဲစင်တာတွင် RCHE စာမေးပွဲတွင်အဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်။
#2 ။ ကျွန်မခရီးသွားဧည့်ဗီဇာအပေါ်သင်တန်းတက်ရောက်ရန်နိုင်သလား?
#1 ။ ဟလာလ်အစားအစာအိန္ဒိယအတွက်ရရှိနိုင်ပါသနည်း
#2 ။ ဂျုးဘာသာဆိုင်ရာအစားအစာအိန္ဒိယအတွက်ရရှိနိုင်ပါသနည်း
ဟုတ်ကဲ့က Chabad အိမ်များတွင်ရရှိနိုင်ပေမယ့်မှသာဒေလီ၌တည်ရှိ၏။ သူတို့ကကြိုတင်မဲအတွက်နှစ်ရက်အကြောင်းကြားရန်ရှိသည်။ ဒါဟာကုန်ကျစရိတ်များအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
#1 ။ ဒါကြောင့်ပါလျှင်ငါဥရောပ / USA တွင်ပြုလုပ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့လျှင်အဖြစ်ကအတူတူအသိအမှတ်ပြုမှု / status ကိုရှိဘူးသည်အရည်အချင်းများအိန္ဒိယပြင်ပမှာတရားဝင်သည်နှင့်အ?
မှန်ပါသည်, အရည်အချင်းများ / အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းကမ္ဘာအနှံ့ခိုင်လုံသောဖြစ်ကြပြီးဥရောပ / USA တွင်ဝယ်ယူတဲ့လက်မှတ်ကဲ့သို့တူညီသောအသိအမှတ်ပြုမှုသယ်ဆောင်
#2 ။ ငါပါဝင်မှုများတဲ့လက်မှတ်ရဖို့ပါသလား
#1 ။ -RHCE (2 ကြာ) ။ ငါသည်အဦးဆုံးသောကြိုးပမ်းမှုအပေါ်စာမေးပွဲခဲ့ပါဖြစ်ရပ်မှာတော့မဆိုပြန်အမ်းငွေရှိပါသလော
သင်ပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှုအတွက်စာမေးပွဲလျှင်ဒုတိယစာမေးပွဲဖြေဆိုအခကြေးငွေများမပါပြန်အမ်းငွေရှိပါသည်။ -RHCE ၏ကုန်ကျစရိတ် (2 ကြာ) ကျောင်းသားတစ်ဦးအခြို့သောရာခိုင်နှုန်းကိုပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှုအတွက်ရှောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးကျောင်းသားအနည်းငယ်သာအရေအတွက် 2nd ယူလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုအကောင့်သို့ကြာပါသည်။
#2 ။ ငါ-RHCE (2 ကြာ) ယူမထားဘူးဆိုရင်ကျနော်ပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှုအတွက်ပျက်ကွက်လျှင်, ငါသည်နေဆဲ-RHCE စာမေးပွဲ resit နိုင်မလဲ? -RHCE ၏အကျိုးကျေးဇူး (2 ကြာ) ကဘာလဲ?
ဟုတ်ကဲ့, သင်-RHCE (250 ကြာ) မယူကြဘူးလျှင်ပင်အမေရိကန် $2တစ်ဦးအပိုဆောင်းကုန်ကျစားရိတ်မှာစာမေးပွဲပြန်လည်ယူနိုင်ပါတယ်။ -RHCE ၏စျေးနှုန်း (2 ကြာ) ကအဆိုပါပြန်လုပ်ရန်၏ကုန်ကျစရိတ်ဒါပေမယ့်လည်းပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှုအတွက်ပျက်ကွက်မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးနောက် retraining မယ့်ပါဝင်သည်။ ဒါဟာအစအပိုနေထိုင်များအတွက်နေရာထိုင်ခင်းနှင့်အစားအသောက်ပါဝင်သည်။
#1 ။ ငါသင်တန်းဆရာများ၏ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုစိတ်ပူမိပါတယ်။ သူတို့သည်ကောင်းသောအင်္ဂလိပ်စကားပြောသလား?
၎င်းတို့အားပွောအလွန်ကောင်းသောအင်္ဂလိပ်မှာအားလုံးသင်တန်းဆရာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏ 90% အိန္ဒိယပြင်ပကနေဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းဆရာတစ်ဦးကြားနေဝဲ၌ဟောပြော။
#2 ။ အပြင်ကတခြားရက်ပေါင်းအိန္ဒိယတွင်အားလပ်ရက်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကနေ? ဘယ်အချိန်မှာအစားထိုးလူတန်းစားကျင်းပသလဲ?
ဒေလီ / Dehradun / Shimla
နှစ်သစ်ကူး - 01 ဇန်နဝါရီ
သမ္မတနိုင်ငံနေ့ - 26 ဇန်နဝါရီ
Holi - 24 မတ်လ
Independence Day - 15 သြဂုတ်
ဂန္ဒီ Jayanti - 02 အောက်တိုဘာ
Dushera - 11 အောက်တိုဘာ
Diwali - 30 အောက်တိုဘာ
Dussehra - 11 အောက်တိုဘာ
Karnataka Rajyotsav - 01 နိုဝင်ဘာ
#3 ။ ငါအိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ငါ့မိုဘိုင်းဖုန်းကိုသုံးပါနိုင်သလား?
#4 ။ ငါ့ကိုနဲ့ငါ့ဖက်ကိုရောက်စေဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့, သင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ သို့သော်ဟိုတယ်နေရာထိုင်ခင်းနှင့်အစားအသောက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦးအပိုဆောင်းကုန်ကျစားရိတ်ရှိရလိမ့်မည်။
#5 ။ ကျနော်တို့4လူတွေကိုလေ့ကျင့်ချင်နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတစ်ဦးလူတန်းစားအတွက်သူတို့ကိုချင်ပါတယ်။ ဒါဖြစ်နိုင်လို့လား?
သငျသညျ4သင်တန်းသားများကိုပေးပို့လျှင်ဟုတ်ကဲ့, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အသင့်လျော်မဆိုနေ့စွဲ™ကနေစတင်ရနိုင်သောသူတို့အဘို့အသီးသန့်လေ့ကျင့်ရေးပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
#6 ။ ငါကအခြားသင်တန်းများအတွက်စိတ်ဝင်စားရလျှင်ငါသည်အခြားသင်တန်းများလုပ်ဖို့ငါမှီခိုဘယ်အရာကိုတိုးချဲ့နိုင်သလဲ
ဟုတ်ပါတယ်, သင်သည်အခြားသင်တန်းများအတွက်သင်၏နေထိုင်တိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားအများအပြားကြောင်းလုပ်ပါ။ ဒါဟာသင်အိန္ဒိယ၌သင်တို့၏နေထိုင်စဉ်အတွင်းပိုပြီးသင်တန်းများမှ upgrade နိုင်အောင်အဆိုပြုထားသင်တန်း၏အဆုံးသည့်ရက်စွဲပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ် / ရက်သတ္တပတ်နူန်းကျော်ကျော်တရားဝင်မှုနှင့်အတူအိန္ဒိယဗီဇာများအတွက်တောင်းဆိုရန်အကြံပြုလိုတယ်။
#7 ။ သင်အွန်လိုင်းသင်တန်းကိုတက်ရောက်ရန်ကမ်းလှမ်းပါသလား
#8 ။ ငါဆိုက်ရောက်အပေါ်ကွာခြားချက်ပေးဆောင်နိုင်အောင်ငါ့အဖွဲ့အစည်းကအစားအသောက်နှင့်နေထိုင်စရာမလိုဘဲလေ့ကျင့်ရေးကြေးများအတွက်ပေးဆောင်နိုင်မဖြစ်နိုင်ပါသလော
ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ကုမ္ပဏီကိုသာလေ့ကျင့်ရေးကြေးပေးဆောင်နိုင်ပြီးသင်ကအစားအစာများများအတွက်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ဆိုက်ရောက်အပေါ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နေဖို့နိုင်ပါတယ်။